SAMBAVA : Vehivavy iray maty notapahin-doha, tsy hita popoka ny vadiny
An-taonany maro izao no tsikaritra fa lasa mahasahy mandatsak’aina ny olona ankehitriny ary indrindra fa ady eo amin’ny mpivady no tena maro amin’ny tranga niseho tato ho ato. 11 décembre 2018
Matetika dia ny vehivavy hatrany no lasibatra amin’ny fikasihan-tanana sy vono amin’ny fomba mahatsiravina. Voahitsakitsaka sy tsy hita intsony ny zo amin’ny maha vehivavy rehefa sendra ny olona biby fisainana. Toy ny zava-niseho tao Ambodiazomamy, kaominina Morafeno Distrikan’i Sambava ny faran’ny herinandro lasa teo iny dia renim-pianakaviana iray manodidina ny 27 taona eo ho eo no nindaosin’ny fahafatesana, notapahin-doha.
Ireo mponina mpifanolo-bodirindrina tafafoha maraina no nahita ilay ramatoa nitsirara tamin’ny tany sy tapaka vozona tao amin’ny trano fonenany. Nandriaka ny ra ary nahitana mangana sy dian’antsy marobe ny vatany. Akory ny hatairan’ny fokonolona rehefa tsy nahita ilay rangahy vadiny tao an-tranony intsony. Tsy hita popoka ralehilahy antsoina hoe Jean Edino hatramin’izao, izay voalaza fa nahavanona namono ny vady andefimandriny.
Efa manaporofo sahady ihany koa izao fa ady teo amin’ny roa tonta no niavian’ny habibiana tsy roa aman-tany tahaka izao. Eo am-pelatanan’ny zandarimaria Sambava ny fanatanterahana ny fikarohana itsy farany hatreto. Hatramin’ny ora nanoratanay ny lahatsoratra omaly tolakandro aloha dia mbola tsy hita io lehilahy io. Arahina akaiky ny tohin’ny famotorana lalina ataon’ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao ka mangataka fiaraha-miasa akaiky amin’ny fokonolona izy ireo ny amin’ny fanomezana vaovao marim-pototra.